Harry Potter: Wizards Unite 0.8.0 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 0.8.0 လြန္ခဲ့ေသာ3ပတ္က
ဂိမ္းမ်ား စြန္႕စားခန္း Harry Potter: Wizards Unite
Harry Potter: Wizards Unite ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ဟယ်ရီပေါ်တာ: Wizards စည်းလုံးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကစားသမားတို့၏လက်များတွင်မှော်ကိုထည့်လေ့မရှိသော Wizard ကမ္ဘာ့ဖလားအားဖြင့်မှုတ်သွင်းထားတဲ့လာမည့်လုပ်ခဲ့ပြီးအဖြစ်မှန် (AR) အစစ်အမှန်ကမ္ဘာဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ co-ဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့် Niantic, Inc နှင့် WB အားကစားပြိုင်ပွဲဆန်ဖရန်စစ္စကိုကပူးတွဲထုတ်ဝေ, ဟယ်ရီပေါ်တာ: Wizards စည်းလုံးစေ Portkey ဂိမ်းများ, J.K. အားဖြင့်မှုတ်သွင်းအသစ်က Wizard ကမ္ဘာ့ဖလားမိုဘိုင်းနှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းအတွေ့အကြုံများကိုဖန်တီးဆက်ကပ်အပ်နှံသည့်ဂိမ်းများကိုတံဆိပ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည် သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စွန့်စားမှု၏ဗဟိုမှာကစားသမားနေရာကြောင်း Rowling ရဲ့မူလပုံပြင်များ။ ယနေ့ pre-မှတ်ပုံတင်ပြီးဟယ်ရီပေါ်တာသည့်အခါကိုသိရန်ပထမဦးဆုံးဖြစ်: Wizards စည်းလုံးစေသင့်ရဲ့ဒေသတွင်း၌လွှတ်တင်။
THE Wizard ကမ္ဘာမှာသင့်အပိုင်း PLAY
The Magic အားလုံးသင်တို့ပတ်လည် IS
သငျသညျပွငျပခြေလှမ်းနှင့်ကမ္ဘာစူးစမ်းသကဲ့သို့, မြေပုံ Foundables ၏တည်နေရာညွှန်ပြကြောင်းမှော်၏သဲလွန်စဖော်ပြပါလိမ့်မည်။ ဤရွေ့ကားသဲလွန်စအမျိုးမျိုးသောအစစ်အမှန်ကမ္ဘာတည်နေရာမှာတွေ့ရတဲ့နှင့်အပြည့်အဝ 360 ဒီဂရီအဆင့်မြင့် AR အတွက်ကြွယ်ဝစွာအသေးစိတ် 3D တွေ့ဆုံဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည်။ သငျသညျလုံခြုံစွာ Wizard ကမ္ဘာကသူတို့ကိုပြန်လာနိုင်ရန်အတွက် Foundables ဝန်းကျင် confounding မှော်အနိုင်ယူဖို့စာလုံးပေါင်းအမျိုးမျိုးကိုနှင်ထုတ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနစာလုံးပေါင်း replenish ကြောင်း Inns, ဆေးစိုက်ခင်းလုပ်ကိုင်မည်ဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်ကွာကမ္ဘာကြီးနေရာများတွင် wizarding အမျိုးမျိုးရန်သင့်အား whisk နိုင်သည်ကိုပင် Portkeys အပါအဝင်သင့်ရဲ့ခရီးပေါ်တွင်သင်ကူညီကြလိမ့်မည်သည့်အခြားအရာများအတွက်မျက်စိထုတ်ထားပါ။
အဆိုပါ Wizard ကမ္ဘာကြီးကိုသင့်ရဲ့အကူအညီကိုလိုအပ်ပါတယ်! သင့်ရဲ့ Wand အဆင်သင့်, သင်၏မိတ်ဆွေများသတိပေးနှင့် WizardsUnite.com မှာပိုပြီးအဘို့အညှိနေဖို့။
Harry Potter: Wizards Unite အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Harry Potter: Wizards Unite အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Harry Potter: Wizards Unite အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
burnu စတိုး 2.61k 860.64k
Harry Potter: Wizards Unite ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Harry Potter: Wizards Unite အခ်က္အလက္
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://www.nianticlabs.com/privacy/
လက်မှတ် SHA1: 49:81:63:2F:49:AF:7D:69:BF:E1:61:F4:85:47:63:85:B8:9C:CA:22
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Niantic
Harry Potter: Wizards Unite APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ